Baraasiil:in ka badan 60,000 oo qof ayaa udhintey Covid-19 bishii maarso - Wardeeq 24 TV Baraasiil:in ka badan 60,000 oo qof ayaa udhintey Covid-19 bishii maarso Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Dunida Baraasiil:in ka badan 60,000 oo qof ayaa udhintey Covid-19 bishii maarso
Baraasiil:in ka badan 60,000 oo qof ayaa udhintey Covid-19 bishii maarso
Baraasiil: In badan 60,000 oo qof ayaa u dhintey Covid-19kii bishii Maarso
Sawirka Brazil ayaa si aad ah loo kobciyay markii labaad ee ugu badan ee loo yaqaan ‘Covid-19’ oo loogu talagalay dhammaan
Qiyaastii 66,570 qof oo ku nool dalka Brazil ayaa u dhintey cudurka loo yaqaan ‘Covid-19’ bishii Maarso, taas oo ka badan labanlaab tii hore ee billaha ahayd, tirakoobyada ayaa si wanaagsan looga hadlay.
Adeegga bulshada ee dalka ayaa loo riixay qarka u saaran iyada oo kiisaska fayrasku ay sii kordhayaan.
Madaxweyne Jair Bolsonaro ayaa wajahay cambaareyn culus sida uu u maareeyay dhibaatada ku dhacday iscasilaad heer sare ah isbuucaan.
Laakiin Arbacadii wuxuu markale canbaareeyay talaabooyinka xiritaanka ee ay soo rogeen gudoomiyeyaasha maxalliga ah iyo magaalada duqa.
Ma dooneyno inaan ku dhibaateeyo dhibaatada aan iska joogno guriga, ayuu yiri.
Arbacadii sidoo kale waxaan arkay 3,800 oo cusub oo aad u kacsan iyo in badan 90,000 oo kiisas cusub oo coronavirus ah. Dhimashada maalinlaha ah ee Brasil ayaa hadda ah tan ugu dhow qiyaastii rubuc ka mid ah geerida coronavirus ee doorashada.
Taliyayaasha cusub ee ilaalada, badda iyo cirka ayaa ku saabsan khilaafka Arbacadii si loogu badalo kuwa waa casilay Talaadadii banaabax cad oo ka hadlay dhamaan xil ka qaadistii lama filaanka ahayd ee wasiirka gaashaandhiga Fernando Azevedo e Silva.
Mr Bolsonaro iyo wasiirkiisa waxay isku khilaafeen arinta ku saabsan daacadnimada qalabka korontada, taas oo wasiirka gaashaandhiga uu ku sheegay in loo ilaalinayo ilaalinta dastuurka halka laga taageeri karo madaxweynaha shaqadiisa.
Mid ka mid ah khabiir ku takhasusay cudurrada faafa oo ku nool Brazil ayaa ka baqaysa in waddanku “khatar u noqdo horumarka bulshada
Doorka ay leedahay qalabka korontada sida sharciga Brazil uu ahaa arin xasaasi ah tan iyo markii dalku ku soo laabtay dimuqraadiyada sanadkii 1985 ka dib 21 sano oo xukun milatari ah.
Wasiirka cusub ee gaashaandhigga, Walter Braga Netto, ayaa si wanaagsan uga hadlay Paulo Sergio Nogueira de Oliveira oo madax u noqon doona ciidanka, Almir Garnier oo ah taliyaha ciidamada iyo Carlos Almeida Baptista Júnior oo ah ciidanka cirka.
Ku dhawaaqidiisu waxay leedahay sanad guuradii ka soo wareegtay afgembigii 1964 ee militariga xukunka la wareegay.
Wuxuu yiri militariga “laguma heli doono isagoo doonaya markay wadanka u baahdaan”. Maalin ka hor ayuu walaac ka muujiyey asaga oo leh inqilaabku “wuu nabadeeyay wadanka” waana in loo dabaaldegaa.
Madaxweyne Bolsonaro, oo ahaa kabtankii hore ee ciidanka, ayaa naftiisa kiciyay caro 2019 markii uu abaabulay xuska afgambiga.
Sidoo kale markii uu waayey wasiirkiisii ​​gaashaandhigga, Mr Bolsonaro sidoo kale wuxuu ku khasbanaaday inuu beddelo wasiirkiisa arrimaha dibadda iyo shanta kale ee ka tirsan golaha wasiirrada. Marcelo Queiroga, oo ku takhasusay cudurada wadnaha, ayaa noqotay wasiirkii afaraad ee caafimaadka tan iyo markii uu cudurka faafiyey.
Inbadan oo ku saabsan sheekadan
Madaxweynaha xilka laga qaaday ee Brazil ayaa isku shaandheyn lagu sameeyay golihiisa wasiirada
La daabacay 1 maalin kahor
Dhimashada maalinlaha ah ‘Covid death’ waxay dhaaftaa 3,000 markii ugu horeysay
La daabacay 24 Maarso
Adeegga abaabulka ee Baraasiil ‘dhibaatadii ugu xumeyd abid
Previous articlePuntland oo digniin culus u dirtay shaqaalaha QM
Next articleDoorashada Soomaaliya: Sababta aysan Beesha Caalamka u khasbi karin madaxda Soomaalida